Tafaftiraha Wargeyska Jamhuuriya Oo Xabsiga Laga Sii Daayay Markii Uu Xidhnaa Saacado Kooban | Araweelo News Network (Archive) -
Tafaftiraha Wargeyska Jamhuuriya Oo Xabsiga Laga Sii Daayay Markii Uu Xidhnaa Saacado Kooban
Hargeysa(ANN)Tafaftirihii Wargeyska caanka ah ee kasoo baxa Hargeysa Maxamed Cumar Cabdi (Ciro) ayaa lasii daayay caawa kadib markii uu ku xidhnaa xarunta CID ee baadhista denbiyada dhawr saacadood, iyadoo xabsiga u taxaabeen maanta gelinkii danbe
koox ciidanka bilayska ah oo ugu yimi xarunta Wargeyska jamhuuriya ee magaalada Hargeysa.
xiligaa oo uu ku jiray hawshiisa shaqo.”Caawa ayay igu yidhaahdeen iska tag oo shaqadaadii qabso, waxanu doonaynaa inaanu xafiiskii ku geyno. sidaa waxa yidhi Tafaftiraha oo aanu caawa khadka isgaadhsiinta kula xidhiidhnay, wuxuuna intaa ku daray in aan loo sheegin cida sii deysay iyo cida soo xidhay toona.
“Waxa loo keenay waaran waana la kaxeeyay.” Sidaa waxa yidhi Xuseen Cali Nuur oo ah tafaftiraha wargeyska Republic oo aanu weydiinay xadhiga Tafaftiraha Jamhuuriya. qaabka loo xidhay Tafaftiraha ayaa ah mid aan waafaqsanayn xeerka saxaafada iyo dastuurka dalka.
Lama garanayo sababta ka danbaysa xadhiga Tafaftiraha jamhuuriya, balse waxa la rumaysan yahay inay la xidhiidho war ku saaabsan Hantidhawrka oo ka dalbaday Xeer Ilaalinta qaranka in maamuuska laga Xayuubiyo Maayarka iyo Maayar xigeenka Hargeysa oo baadhitaano ku socdeen mudooyinkii u danbeeyay si xabsiga loogu taxaabo, kaas oo wargeysku baahiyay shalay.
wixii kasoo kordha xadhiga Tafaftiraha Jamhuuriya kala soco Araweelonews